Mapikicha eApple Watch akafuridzirwa neBreathe app kubva kuWatchOS 3 | Ndinobva mac
Mapikicha eApple Watch akafuridzirwa neBreathe app muWatchOS 3
Vagadziri vanogara vakamirira zuva rekutanga, iyo kokero yainotumira, matsva mashandiro ... kutanga michina uye kutanga kushanda pane izvo chinhu chimwe nechimwe chinogona kumutsa. Kumwe kwekushandisa kunozouya kubva kuruoko rwewatchOS 3 ndiko Kufema, chishandiso chinotibvumidza kutora mweya kana kunetseka kuchitanga kutitora.
Nenzira iyi tinogona kudimbura zvachose yezvinhu zvese panguva iyo isu yatinomisikidza kuti iite yakachena slate kuenderera sekusvika panguva yekushushikana kwekurwiswa kwataive tave kuda kutambura. Zviripachena kuti iwe unofanirwa kutenda mune izvi zvinhu kuti iite basa rayo chairo, asi Apple ichatarisira izvo nekushambadzira kwazvinoita nezvazvo.
Kutora kurudziro kubva kuiyo nyowani Kufema app, Vagadziri vaviri vakagadzira akasiyana mapikicha, ayo isu atinogona ikozvino kuwedzera kune edu iPhone, iPad uye Mac / PC zvishandiso. Kunyangwe zvisiri zvinoshamisa, zvinhu sezvazviri, pakupera kwechinyorwa tinokusiira iyo mifananidzo kuti iwe ugone kurodha pasi mukugadzirisa kwavo kwekutanga, izvo zvisina kufanana nemufananidzo unoratidzwa muhombe. Kuti utore kurodha iwe waifanira kuenda kuzasi kurudyi kwechifananidzo uye tinya pa Ona saizi izere, kuti iratidzwe mukugadziriswa kwepakutanga uye ugone kuishandisa kune yedu kifaa.
watchOS 3 kusvetuka kukuru mukushanda kweApple Watch, uko kuwedzera kune Breathe kunyorera uye kuburitswa kukuru kune vanogadzira, Apple yakazivisa kuti kumhanyisa kwekumhan'ara kwekushandisa kwakagadziriswa kusvika kanomwe, ndiko kuti, neWatchOS 7 inomhanya ka3 nekukurumidza kupfuura neshanduro yazvino yeWOSOS, nhamba 7. Chaizvoizvo ichokwadi, zvirinani kubva pane zvataurwa zvandakagamuchira kubva kune vakugadziri vakasiyana vachitaura kuti kumhanya nekuita kwave nani kwazvo.
Kufema neaxinen (iPhone)
Kufema neaxinen (iPad)
Heavy Breathing naKiwimanjaro (iPhone)
Kufema neaxinen (tafura)
Chiedza Kufuridzira naKiwimanjaro (iPhone)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mapikicha eApple Watch akafuridzirwa neBreathe app muWatchOS 3
Sniper Ops 3D Kill Terror Shooter, mutambo mutsva weMac uye mahara
Apple inobatana neiyo Gay Pride parade uye inopa kure Pride tambo yeApple Watch